Hoodies alaabooyinka Shiinaha oo daabacan oo loogu talagalay haweenka warshad iyo soo saarayaasha | Dufiest
Hoodies pullover oo daabacan loogu talagalay haweenka
Magaca wuxuu ka yimid 'Loopwheel', oo ah mashiinka tolnimada dhaqanka oo taariikh ahaan loo isticmaali jiray in lagu tolo dharka. Lahaanshaha siddooyinka xagga dambe ee dharka waxaa markii hore loogu talagalay in lagu oggolaado dhididka si dhididku jirkaaga uga soo nuugo una mariyo dharka si aad u qabowdo. A dhididka waxaa lagu sameeyaa cudbi culus. Dhididka ayaa loogu talagalay in lagu diiriyo xilliga qaboobaha. A dhididka sidoo kale waxaa loola jeedaa in lagu diiriyo adiga, in kastoo taasi aysan ahayn ujeedkeeda keliya. La socoshada hal diiran, waxay sidoo kale dhuuqayaan dhidid sida aan horay uga soo hadalnay maqaalka.Mid ee waqtiyada ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto a dhididka waa marka cimiladu hoos u dhacdo. Anaga kugula talin diiran guntin jiilaalka xirato dhididka leh hoodies ama aan lahayn. Adiga xiran karo iyaga la surwaal diiran oo isku mid ah ama dooro inaad ku darto surwaal jireed haddii aad qorsheyneyso inaad jimicsi sameyso.
Dharka dharka hoosta lagu xidho ee loo yaqaan 'hoodie' ayaa ah xulasho kulul oo ka dhex jirta dadka adduunka oo dhan oo aan ku iibinayno qiimo jumlad. Waxaan u isticmaalnaa dhar kala duwan sida suufka, acylic, polyester iyo Dumarka hoodie waxaa lagu heli karaa qiimo jumlad ah. Macaamiilku waxay ku iibsan karaan hoodie jumladle tiro aad u tiro badan AT qiimaha tartanka AS isboortiga DUFIEST waa soo saare gaar ah oo ka socda Shiinaha, jumladle, dhoofiyaha iyo warshadda dharka isboortiga, hoodies ， track jackets and bottom, T-shirt, Tank top and fit calim dress. Waxaa loo isticmaali karaa guriga iyo shaqada labadaba Dayrta iyo jiilaalka, oo ah mid aad u jilicsan oo moodada ah.
Dumarka hoosta hoosta ka samee ee naqshadeynta 'DUFIEST' ayaa si aad ah looga shaqeyn karaa suuqa shisheeye. Sida qaab aan caadi aheyn waxay ku leedahay naqshad cusub ama nashqadeyn shaqsiyadeed midabkan dhogorta iyo cudbiga-isku-dhafka ah ee dhogorta dhogorta leh, tani waxay noqon doontaa hoodie-kaaga cusub ee aad jeceshahay.
· Dhar dhogor culus oo waara oo lagu sameeyay 60% cudbi / 40% caag ama xardhan
· Waxaa ka mid ah jeebka hore ee dhogorta dhogorta leh iyo fidinta suumanka feedhaha iyo dhexda
· Qaabka caadiga ah ee unisex
Ballaadhi haddii aad u baahan tahay wax qol yar
Waxay kuxirantahay naqshad daabacan oo cad oo daabacan
· Mashiinka ku dhaq dhaqmo leh midabbo isku mid ah, oo hoos u qalala
· La dhoofiyey
Hore: jaakad jiinyeer hoodie jiinyeer jiinis loogu talagalay dumarka
Xiga: hoodies pullover oo far waaweyn ku leh ragga